OBD SCAN ကို TECH မှအခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
OBD Scan ကို Tech မှ 0,77
အဖြူက Black-and ဓာတ်ပုံတွေ, သင်တန်း, တယော mystique နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့သောပုံသုတ်ဆေးပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာဟောင်းများကိုရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထု၏အဆင်းအရောင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကွဲလွဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်, ရဲ့ Photoshop မှာအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓာတ်ပုံပန်းချီဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။
ဒါဟာ site ပေါ်တွင်အရာများစွာကိုသင်ခန်းစာဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူများသည်သင်ခန်းစာတွေကိုပိုမိုခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ယနေ့တွင်ပိုပြီးအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းပိုင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိရလိမ့်မည်။
ဒါကဓာတ်ပုံကိုကျနော့်သင်ခန်းစာထိုသို့ bleached, မူလကအရောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အရောင်ဓာတ်ပုံကိုအောင်ကဘယ်လို, ဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။
ဓာတ်ပုံထဲတွင်အရာဝတ္ထုများ၏အရောင်ရစေအဖြစ် Photoshop မှာဒီ function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် ရောစပ် modes သာ အလွှာသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စား "Chroma"။ ဒီ mode ကိုသင်မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်အခြားမျက်နှာပြင် features တွေစောင့်ရှောက်ခြင်း, အ္ထုဆေးထိုးခြင်းမှခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီအလွှာများအတွက်အလွှာ mode ကိုပြောင်းပေးပါ "Chroma".
အခုဆိုရင်အရေးအပါဆုံးအရာ - ကဓာတ်ပုံတ္ထုများနှင့်ဒြပ်စင်များ၏အရောင်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်း fantasize နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကအလားတူဓာတ်ပုံများရှာဖွေ Photoshop မှာသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်အပြီးသူတို့နှင့်အတူအရောင်တစ်နမူနာယူနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မအနည်းငယ်လိမ်လည်လှည့်, ဒါကြောင့်ငါကြည့်ရှုဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ ငါမူရင်းဓာတ်ပုံများနှင့်အတူယူပြီးပါလိမ့်မည်အရောင်များ၏တစ်ဦးကနမူနာ။
လက်ဝဲဘက် toolbar ကိုအရောင် palette အပေါ် foreground color ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပေါ်လာသော:
ထို့နောက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါကညာဘက်ကိုအရောင်ဖြစ်သည့်ဒြပ်စင်ပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါ။ ပွင့်လင်း palette မှာ cursor, အလုပ်ဧရိယာသို့လာပြီ, တစ်ဦး pipette ၏ပုံစံကိုကြာပါတယ်။
အခုဆိုရင်ယူ တစ်ခက်အနက်ရောင် opacity ကိုအတူဖြီးနဲ့ 100% ဖိအား,
ကျနော်တို့ blending mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ထားတဲ့အတှကျအလွှာပေါ်မှာငါတို့အဖြူအနက်ရောင်-and ဓါတ်ပုံကိုသွားပါ။
ငါတို့သည်အတွင်းပိုင်းဆေးထိုးခြင်းမှစတင်။ အလုပ် Painstaking နှင့်မအစာရှောင်ခြင်း, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ပါ။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းမကြာခဏဖြီးအရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ လျင်မြန်စွာဒီကသင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်စတုရန်းကွင်းခတ် အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုအဘို့, ပိုကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံ၏စကေးတိုးမြှင့်။ ဆက်သွယ်မရတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် "Lupe"သင်က key ကိုနှိမ့်ချကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် CTRL နှင့်စာနယ်ဇင်း + (Plus အား) သို့မဟုတ် - (အနုတ်).
Next ကို, တူညီတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုဒြပ်စင်ဆေးထိုးခြင်း။ ထိပ်ဖျား: တိုင်းဒြပ်စင်အသစ်အအလွှာအပေါ်ပန်းချီဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, သငျသညျယခုအဘယ်ကြောင့်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ palette ညှိနှိုင်းမှုအလွှာမှထည့်သွင်းခြင်း "Hue / Saturation".
Properties window ကိုခုနှစ်တွင်ပုံရိပ်ပေါ်တူ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ:
ဒီအကြိုးသကျရောကျနော်တို့က palette ထဲမှာကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်သောအလွှာကိုမှညှိနှိုင်းမှုအလွှာခညျြနှောငျ။ အကျိုးသက်ရောက်မှု၏အခြားအလွှာတွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအလွှာပေါ်တွင် element တွေကိုဆေးထိုးခြင်းရန်အကြံပြုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့တွင်အတွက်စစ်ဆေးမှုများထားပါ "Tone" နှင့်အနည်းငယ်လျှောကစား။
ဤနည်းပညာများသည်တစ်ခုတည်းကို Photoshop ဖိုင်ကနေကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ရုပ်ပုံများကိုရယူနိုငျပါသညျ။
ဒီတွင်, ဖြစ်ကောင်း, အရာအားလုံး။ ဤနည်းလမ်းကိုမူထူးခြားတဲ့မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်ပေမယ့်ကအတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ငါသင်သည်သင်၏အလုပ်အတွက်ကောင်းသောကံဆန္ဒရှိ!